I-Sleepover Diemen - I-Airbnb
Diemen, Noord-Holland, i-Netherlands
Lesi situdiyo simaphakathi ne-Diemen futhi siseduze nenxanxathela yezitolo enezitolo ezinkulu nezindawo zokudlela. Ungahamba ngezinyawo uye kuzithuthi zomphakathi emizuzwini emi-5: isitimela noma ithilamu futhi usenkabeni ye-Amsterdam phakathi nemizuzu engama-20.
Lesi situdiyo sihlome ngokuphelele, sinevulandi, indawo yokungena yangasese, indawo yokupaka yangasese yamahhala futhi sinendlu yokugezela, ikhona lekhofi, isiqandisi, isisefo sekhompiyutha ephathekayo, i-TV, imibhede emibili ne-WiFi.
Indlu yethu yezivakashi engu-18 m2 inomnyango wangasese oneminyango yesiFulentshi kanye nevulandi elinebhentshi nezihlalo ezikhululekile.
Kukhona ifriji, iketela nomshini weNespresso nezinkomishi zekhofi zeNespresso
Endlini yokugezela kukhona i-shampoo ne-shower cream. Yebo kukhona amathawula ekhwalithi yehhotela ngobukhulu obuhlukahlukene kanye nesomisi sezinwele.
Ubusuku obufudumele? Umlandeli ongenamsindo uqinisekisa ukulala kahle ebusuku.
Sazise uma uza ngemoto! Sinendawo yokupaka yamahhala etholakalayo kuwe eduze kweBenb.
Siphinde sibe nombhede uma uza nomntwana omncane, sicela usazise kusenesikhathi.
I-HDTV engu-50" ene- I-Netflix, ikhebula ye-premium
I-Diemen inesikhungo sokuthenga esinezitolo ezinhle, izitolo ezinkulu kanye nezindawo zokudlela. Kunezindawo zokudlela ezithokomele endaweni. I-Diemenbos iwuhambo lwemizuzu engamashumi amabili ukuze uhambe ngezinyawo ngemvelo kanye ne-The house of Bird ukuze uthole isidlo sasemini esimnandi, isidlo sakusihlwa noma ubhiya owenziwe ekhaya. Ungakwazi ukufinyelela kalula i-Weesp, i-Muiden kanye ne-Muiderslot ngemoto.
Ngiyathanda ukuhlangana nawe. Kodwa uma ungakudingi ukuxhumana, ngizokushiya wedwa.
Inombolo yepholisi: 0384 FEAD B76D 3A44 8E2E
Hlola ezinye izinketho ezise- Diemen namaphethelo